Dhibcaha Kaqeybgalka Bulshada | Martech Zone
Inta badan suuqleydu waxay fahmaan muhiimadda ay leedahay isticmaalka warbaahinta bulshada si ay ula macaamilaan macaamiisha, u dhisaan wacyiga sumadda una abuuraan hoggaanno, laakiin shirkado badan ayaa wali halgamaya. Sideed uga qaybgashaa himilooyinka heer shaqsiyeed, u soo bandhigtaa qiimaha shirkaddaada oo aad ugu dambayn ugu rogtaa macaamiil?
Ganacsi waxaa jira qiimo yar oo haysashada kumanaan taageerayaal Twitter ah haddii aysan cidina kaa iibsanayn. Waxay hoos ugu sii socotaa si loo qiyaaso natiijooyinka oo si fudud loo ogaado haddii waxa aad qabanayso ay shaqeynayaan.
At Right On Interactive waxaan diirada saareynaa sidii aan u heli lahayn dariiqooyinka ugu wanaagsan ee lagu cabiro guusha, waana ku sameyn karnaa inaan dhalino heerar kala duwan oo hawlgal ah. Mashiinka dhibcaha ee 'Right On' ayaa raadraacaya dhammaan howlaha iyo isdhexgalka ku hareeraysan astaantaada. Waxaan dhalinaynaa kaqeybgal bulsho.
Aynu eegno emaylka tusaale ahaan. Waxaad u soo dirtaa rajadaada joornaalka emailkaaga billaha ah. Qof kasta oo fura ayaa dhibic hela. Haddii ay dhagsadaan xiriiriyaha emaylka taasi waa qodob kale. Haddii taasi soo booqato boggaaga, waxay kasbadaan dhibco badan. Qaatayaasha leh dhibcaha ugu badan ayaa ah kuwa inta badan ku hawlan.
Midnimada saxda ah ee Twitter fikraddaas oo kale ayey u keenaysaa baraha bulshada.
Iyadoo la raad raacayo dhammaan howlaha ka dhacaya agagaarka akoonka twitter-ka ee suuqleyda waxaan awood u leenahay inaan howsha hoos ugu soo dhaadhicino mashiinka dhibcaha ee 'Right On' oo aan ugu dirno qiimeyn heerar kala geddisan hawlgelinta.
Waa maxay sababta ROI ee Dhibcaha Bulshadu u kala duwan yihiin
Qaar badan oo ka mid ah badeecooyinka Twitter-ka ee hadda jira waxaa ku jira alaab-weyneyeyaal. Wax ayaad ku dhajinaysaa koontada warbaahinta bulshada waxaadna rajeyneysaa inay hesho retweets si ay u gaarto dhagaystayaal ballaaran. Waxay u egtahay inaad boorar ku dhajineyso wadada weyn isla markaana aad u rajeynayso dad badan inay arkaan.
At Right On Interactive waxaan diirada saareynaa dhibcaha iyo kaqeybgalka, ma ahan kordhin. Waxaan xiiseyneynaa aqoonsiga iyo dhibcaha calaamadaha iibsashada. Adoo ka caawinaya macaamiisha inay macno u yeeshaan dadaalkooda suuqgeynta warbaahinta bulshada waxay si dhakhso leh u arki karaan tabta ugu wax ku oolka ah.
Dhibcaha Bulshada ee ROI si buuxda ayaa loo habeyn karaa
Isdhexgalku wuxuu soo jiidayaa dhammaan xogta ku hareeraysan koontada Twitter sida kuwa raacsan cusub, tilmaamaha magaca, retweets iyo farriimaha tooska ah. Mid kasta oo ka mid ah waxqabadyadan waxaa loo qoondeyn karaa dhibco ka-qaybgal, iyadoo suuq-geyntu ay xakamaynayso dhibcaha. Si buuxda ayaa loo habeyn karaa.
Tusaale ahaan, raacsane cusub ayaa heli kara hal dhibic. Dib-u-celinta ayaa noqon karta mid u qalma laba. Haddii rajo ay toos u dirto koontada laga yaabo inay u qalanto 10 dhibcood. Suuqyayaashu waxay u xilsaari karaan qiyam waxqabadyada ka qaybqaadashada ee ay dareemayaan inay yihiin kuwa ugu muhiimsan uguna waxtar badan.
Ku Aqoonsiga Leeds Hot iyada oo loo marayo Dhibcaha Bulshada ee ROI
Is-dhexgalka cusub ee Twitter ayaa hadda ah astaamaha caadiga ah Xuquuqda barnaamijka 'Right On'. Waxay kuu ogolaaneysaa inaad u rogto kuwa raacsan magacyadooda xiriiro dhab ah ee keydka shirkadaada. Ku xirnaanshaha xiriirka shirkadda Twitter iyo xog-ururinteedu waxay u oggolaaneysaa kooxda suuq-geynta inay si fiican uga faa'iideystaan ​​dhammaan dhinacyada ka-qaybgalka ku xeeran astaanta.
Mid ka mid ah astaamaha xiisaha badan waxay ka caawisaa suuqleyda inay aqoonsadaan raadadka kulul, kuwaas oo ah kuwa isticmaala kuwa abuura waxqabad badan iyo isdhexgal muddo gaaban. Markaad si dhakhso leh u aqoonsatid isticmaaleyaashaas, waxaad awood u leedahay inaad u gudbiso hoggaanka kulul kooxda iibka isla markiiba.
Waa hal waddo oo dheeri ah Xaqa Isdhexgalka ayaa ka caawinaya ganacsiyada inay sida ugu badan uga faa'iideystaan ​​waxqabadka warbaahinta bulshada.
Xuquuqda Interactive waa suuq geynta suuq geynta shirkadda Martech Zone.
Tags: dhalinta facebookdhibcaha hogaankaLinkin dhaliyayrajo dhalintasaxda ah is-dhexgalkagooldhalinta bulshadagooldhalinta twitter